4.10.20 MCS COVID-19 အသစ်ပြောင်းခြင်း – Mason ဆိုကျောင်းများ COVID-19 ဌာနချုပ်
4.10.20 MCS COVID-19 အသစ်ပြောင်းခြင်း
ငါတို့ရှိသမျှသည်ဤမျှလောက်မုန်တိုင်းများရာသီဥတုနေကြသည် – ပုံဆောင်နှင့်ပကတိ. Despite this COVID-19 pandemic and so many neighbors dealing with power outages yesterday, we are proud of all that our students, staff, families and community are doing to care for each other, establish routines, and learn. Here areafew statistics from the last month:
စောင့်ကြည့် ဒီဗီဒီယို of Superintendent Jonathan Cooper sharing his appreciation for how Comet Culture values shape our actions and decisions.
MCS သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုလမ်းညွှန်ကိုဤ အချိန်မှစ၍ အသက်ရှင်ရန်နှင့် Comet Cares ချဉ်းကပ်မှုကိုသင်ကြားခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်းကိုထင်ဟပ်စေရန်ကတိက ၀ တ်ပြုထားသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ Comet Cares ချဉ်းကပ်မှုကကျွန်ုပ်တို့အားသနားကြင်နာတတ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်, တုံ့ပြန်မှု, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများနှင့်မိသားစုများ '' ထူးခြားတဲ့အခြေအနေများနှင့်အခြေအနေများမှသာတူညီမျှ။ ကျောင်းသားများနှင့် ၄ င်းတို့၏မိသားစုများသည်ဤကမ္ဘာချီအကျပ်အတည်းကာလအတွင်းအတွေ့အကြုံများစွာရရှိသည်. သူတို့ရင်ဆိုင်နေရသောစိန်ခေါ်မှုများကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း, သူတို့ထိန်းချုပ်မှုထဲကဖြစ်ကြောင်းကို, ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်အတန်းဆိုင်ရာမူဝါဒများသည်မည်သည့်ကလေးကိုမျှမထိခိုက်စေရ. ဤဝေးလံသောသင်ယူမှု၏ဤအချိန်ကာလအတွင်း, ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံသည်ကျောင်းသား၏သင်ယူမှုနှင့်ကျောင်းသားများ၏ကောင်းကျိုးကိုသေချာစေရန်ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်အဓိကထားသည်.
အဆင့်၌ 6-12, students who do not engage in Remote Learning Experiences, သို့မဟုတ်နားလည်မှုအခြေခံအဆင့်များကိုမပြပါ, will receive an “Incomplete.” Our school teams will make every effort to support each student. အကယ်၍ ကျောင်းသားများအနေဖြင့်ကျောင်းမှအထောက်အပံ့များနှင့်အဝေးမှသင်ယူခြင်းတွင်ပါ ၀ င်နိုင်ခြင်းမရှိပါက, ကျောင်းသား၏သင်ယူမှုအတွက်အနာဂတ်ခြေလှမ်းများကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကျောင်းအဖွဲ့သည်ကျောင်းသားများနှင့် / သို့မဟုတ်မိသားစုနှင့်အတူပူးပေါင်းပါလိမ့်မည်.
Drop off items at Lakota Hills Baptist Church, 6300 Tylersville Rd., West Chester, အိုး 45069